पारसमणिको पक्षमा - Himalkhabar.com
ब्लगशुक्रबार, फाल्गुण ८, २०७१
– महेश थापा
पारसमणिको सम्पर्क पाए खिया लागेका खोटा धातुहरू पनि नम्बरी सुन झै चम्कन बेर लाउँदैनन्।
मान्छेहरू बेकारमा ल्हारक्याल–ल्हारक्याल भन्दै छ्यालब्याल हुन खोज्छन्। यस्तै बेबकूफहरूको बसेरा बाक्लिएकै कारण नेपाली समाज उँभो नलागेको मेरो निचोड झन् जब्बर भएको छ। ल्हारक्याललाई सभासद् मनोनयन नगरिदिनुभएको भए चाहिं अनौठो हुन्थ्यो भन्ने अदनाहरू बुझदैनन्।
तर, ठन्डी मौसममा पनि हाम्रो विश्वासमा तुषारापात हुन नदिनुभएकोमा उहाँहरूलाई साधुवाद नदिई रहनै सक्दैन, बुझनेको चित्त। कमरेट ल्हारक्याल वास्तवमै त्रिकालदर्शी विज्ञ व्यक्तित्व भएको उनले बोकेको त्रिदेशीय नागरिकताबाटै पुष्टि हुन्छ। लर्तरो हैसियतको मान्छेले त्यस्तो चर्चा कमाउनै सक्दैन। जाबो कालोसूचीमा पर्न त ब्याङ्कले पत्याउनु पर्छ!
कांग्रेस अनि त्यसपछि एमालेमा चरचर चरेर राज्यमन्त्री पड्काएका ल्हारक्याललाई बडो मने राष्ट्रघातको ढ्याङ्ग्रो ठटाएर छेकारो हान्दै बल्लतल्ल दुहुने सफलता मिलेको उपलक्ष्य हो, अहिले एमाओवादीमा। त्यसउसले, नेतृत्वको बढाइँ नगरी विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु बडा अधम काम हो, एमाओवादीजनका लागि।
विपक्षीको ट्याउटिसलाई दह्रो ‘काउन्टर’ हानेर ल्हारक्याल भित्र्याउने जुन रणनीतिक सफलता हासिल भएको छ, त्यसलाई बिर्सेर छेदीलालहरूले ‘किर्ते हस्ताक्षर’ को बात लगाउनु बिडम्वना हो। किर्तेमा नेतृत्वको रिप्पुपनकै कारण यत्तिको चकचकी गर्न पाएको कुरा पनि त बिर्सनुभएन नि!
उसमाथि ‘मालदार’ लाई सभासद् बनाउनु नेतृत्वको कर्तव्य नै हो। सत्तापक्षीय खटपटी चुलिएदेखिन् जति नै ढुके’नि वैरीहरूले तर मार्न त के ढिम्किनसम्म दिएका छैनन्। न त देलान् जस्तो नै छ। धन्न, भाग्योदय चिठ्ठा बनेर ल्हारक्याल आएका छन्। बरा, उनले बेडा पार लगाइदिने सार्वजनिक वचनबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्।
म त्यसै उहाँहरूको लट्टु ‘फ्यान’ भएर मरेको हैन। उहाँहरूको खप्पर घच्चीकै मान्नुपर्छ। राजनीतिको मोर्चामा आँधीतुफान चलाइरहेका नमोले दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा केजरीवालको ‘सुनामी’ आउनासाथ तु हात उठाइदिए। तिर्ताले राजनीतिज्ञहरू त्यति सजिलै कहाँ गल्छन्? तर, सबै तपाईंहरू जस्तो ‘अर्कै माटोले बनेको’ जिनिस हुँदैनन्। त्यसैमा त हामी फिदा छौं।
जमानत जफत भएकाहरूको मोर्चाबन्दी मार्फत जनादेश र मतादेशको धुवाँदार व्याख्या फर्माएका तपाईंहरूबाट अब दिल्लीमा कसरी आपको बाप बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कोचिङ्ग क्लास चल्नुपर्ने दिन आएको छ। दूर्दिनको आठ–आठ वर्ष नोयडा आसपासमा खिदमत–खातिरदारी गर्नेहरूको त्यति फर्ज तो बन्ता है न!
दिल्ली निर्वाचनबाट यहाँहरूले पहिल्याउनुभएको जितको मन्त्र पनि मलाई साह्रै घत लाग्यो। हो, वाईसीएल ब्युँताएर मतदाता नतर्साई सुकेनास लागेको पार्टीलाई हृष्टपुष्ट पार्न सकिन्न अब। कमरेड चित्रगुप्तले बहीखातामा हिसाबकिताब चढाएर राखेका लेखक/पत्रकार, अनि जान्ने पल्टेर पोखिन तम्सने फेसबुके, ट्वीटेहरूलाई वाईसीएल लगाएर कज्याए’सि कसो नआउला केजरीवालको भन्दा पनि
कुर्सी पर्वको साङ्गेसँगै वाच्न थालिएको महाभारतका किस्साहरूको ‘ट्युनिङ’ बदलिएर ‘नेशनल जोग्राफी’ तिर सरेको परिदृश्य पनि कम्ता मनोरञ्जक छैन। यहाँहरूले आफूलाई डमरु र छाउरो भन्दै प्रतिस्पर्धीहरूलाई उकासेको चाहिं अलिक चित्त बुझेन। किनभने, छाउरो जन्माउने स्याल आफ्नै बर्कतले अस्तित्व धानिरहेको जीव हो भने डमरुको बाउ बाघ संरक्षित जनावर। संरक्षित प्रजातिको अस्तित्व संरक्षणकर्ताको रहमोकरममा निर्भर रहने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरियोस्।
जुम्रा र भैंसीको दृष्टान्तमा भने ‘मिस्टेरियस आइल्यान्ड’ भन्ने फिलिम सम्झेर धेरैजना खित्खिताउँदा रै’छन्। त्यस फिलिममा देखाइने रहस्यमयी टापुमा हात्ती लगायतका भीमकाय जीव बिराला जत्रा र माहुरी, कमिला, छेपारा, भँगेरा आदिका ज्यान भने हात्ती बिर्साउने छन्। तर, डाइनोसर आकारकै भए’नि जुम्रो बिचरो जुम्रै हो।
छँदाखाँदाको भैंसी नदेखी कोसौं दूरबाट जुम्रा केलाउनेहरू दृष्टिदोषका बिरामी हुन्! पारसमणिको सम्पर्कमा आउनासाथ फलाम सुनमा परिणत भएझैं यहाँहरूको सान्निध्य पाउनासाथ प्रतिगामीहरू क्रान्तिकारीमा, राष्ट्रघाती राष्ट्रवादीमा र पुरातनपन्थी अग्रगामीमा बदलिने पक्का भन्नुस्।
यहाँहरूको अग्रगमनमाथि मलाई एक पित्को आशंका छैन। समस्त खगोलीय पिण्डहरू गोल भएर मरेकाले मात्र यहाँहरूको अग्रगामी छलाङ एक चक्कर मारेर साविक भन्दा दश कदम पछाडि बजारिएको हो।
यो भू–तल नै लाम्पाटे भएको भे यहाँहरूको ‘लङ्गजम्प’ को रेकर्डतर्फ नजर लगाउने दुस्साहस कुनै ओलम्पियनले गर्दैनथ्यो। बरु, ब्रह्माण्डको रचनालाई नै यहाँहरूको अनुकूलन पार्न ब्रह्माजीमाथि वाईसीएल परिचालन गर्ने कि? ‘क्रान्तिकारी’ ल्हारक्यालबाट थालिएको अभियानमा ‘राष्ट्रवादी’ सिके राउतलाई पनि ल्याउने कि?